Home » Creative Writing » ဂွဇွတ်ရွာမှ စိန်ခေါ်သံ (သို့ ) ချက်တင်တောင်ထိတ်မှ မီးတစ်စ – အပိုင်း (၁)
” မဟုတ်သေးပါဘူး အစ်မတော်ရယ် …
ညီမတို့ချိန်းထားတာ သိုင်းပညာသဘောတရားတွေဖလှယ်ဖို့မဟုတ်လား .. စိတ်ထိန်းပါအစ်မတော်ရယ် .. အော် မေ့ တော ဖော … ရှရီ နမောဗုဒ္ဓဿ … ခြုံ .. ရှင်း .. ယုန် .. ရှာ .. ယုန်ရှာ မြွေတွေ့ … “
” အို … !!! ဘာမှ လာရှင်းမပြနေနဲ့ .. ညီးတို့ရှောင်လင်ကိုယ်တော်တွေက အာဏာရှင်တွေ .. ဒီတိုင်းပြည်မှာ အာဏာရှင်စနစ် တည်မြဲနေတာ ဒီရှောင်လင်ဘုန်းကြီးတွေဂျောင့်ဘဲ …
ဒါကြောင့် အာဏာရှင်စံနစ်ပပျောက်ဖို့ဆိုရင် ရှောင်လင်ကိုအရင်ရှင်းမှရမယ် ..
ဂွစာသိုင်းသမား ခင်ခက်ခက်ခေါ …
ဂျန်ဘိုမင်းသားကြီးကြိုက်မီး … …
အပိုင်း (၁) http://myanmargazette.net/211697
အပိုင်း (၂) http://myanmargazette.net/211803
အပိုင်း (၃) http://myanmargazette.net/211861
ငြင်းစရာရှိတိုင်း ရွာဆူသည် . .
မတင်ခင် ဖတ်ရင်းး ကို ရီနေရတယ်..
နောက်ဆက်လာမယ့်အပိုင်းတွေ မျှော်နေပြီဟေ့ 
ရွာထဲ လူစည်လာတော့ မယ်
ခု မှ ၅ ယောက်ပဲ လာသေးးတယ်..
သိုင်း သရော်စာ ဆိုသည်မှာ ရှားပါးတန်းဝန် အရေးအသားဖြစ်၍ ကျနုပ်ရေးသားပြုစုနေသော သက္ကရာဇ် ၅၀၁၆ ဝတ္ထုကြီးတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြအံ့
စမိုင်တွေ ရမယ် စမိုင်တွေ
လက်နက် မရောင်းရဲလို့ လားး ငင်..!!
မျက်နှာဖုံးရှင်ဟန်လုလု.. မျက်နှာမြင်ရအောင်.. ဖဘမှာသွားချောင်းတာ.. ပေါ်နေပါရောလား..။
တို့ရွာက မပြောနဲ့လေ…….. အငြင်းအခုံလေးနဲ့မှ လူဆူတာ dvb က ဒီဘိတ်လုပ်သလို မြန်မာဂဇက် ဒီဘိတ်ကို အစီအစဉ်လုပ်ရင် ကောင်းမလား..လား လား လား
ပရိုဂျူဆာ ကောင်းသလို စီစဉ်ပါ
ဖတ်ရတာ အရာသာရှိလိုက်တာ ..
ဂျန်ဘိုမင်းသားကြီးကြိုက်မီး … … ကြော်ငြာဝင်ပေးတာ ရှဲရှဲနီ
ကြော်ငြာခလေး အနေနဲ့ သိုင်း ၃ ကွက်လောက် သင်ပေးဘာ/\_
ဒီနေ့ ဝါဆိုလဆန်း ၂ရက် ဖြစ်သွားပြီ။
အင်း ဒရင်းဘက်လေးယူပြီး နေရာဦးထားအုံးမှပါလေ…….
သိုင်းပြိုင်ပွဲ စစချင်း သွားကြည့်လိုက်သေးတယ်
တညား လည်း ကြောက်လို့ ဘာဂါတွေနောက် ပုန်းနေတာ။
ဇတ်သိမ်းခမ်းကျ ဆောင်းဂျွန်ကီလေးနဲ့ တွဲပေးနော်
တော်ပါဘီ စိတ်ကုန်ဒယ် … တောထဲက သစ်ပင်ပေါ်မှာ သွားနေမယ် …
ဖွဘုတ်က ချက်တင်တောင်ကို ရှောင်နေတာ ကောင်းပါတယ်… ခွိ
ဟင့် မအူ ဂူတွင်းမှာ ဂူပိတ်လေ့ကျင့်ထားတာ ဟာတာတိဟာတာ ၀က်သားဒုတ်ထိုး ဆေးစွမ်းတစ်မျိုးလိုနေတာ ကြောင့် သိုင်းအန္တိမ ဆင့်ကို ရောက်ဖို့ လိုနေသေးတယ်။ ဒီဆေးဟာ ဘယ်မှာများရှိနေနိုင်ပါလိမ့်။